DHAGEYSO Ciidanka xoogga Soomaaliya oo ka hadlay dagaalo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo AL-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeelada Hoose. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Ciidanka xoogga Soomaaliya oo ka hadlay dagaalo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo AL-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeelada Hoose.
maalmihii aan ka soo gudubnay waxaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe ee dalka Soomaaliya ka dhacayay dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka iyo Ururuka AL-shabaab,kadib markii shacabka deegaankaasi ay ka soo hor jeesteen amaro ay AL-shababa ku soo rogeen sidoo kalena ay dagaal kala hortageen.
Xiisada u dhexaysay AL-shabaab oo ka bilaabatay xoolo ay shabaabku sakwaad ugu yeeran ayaa waxay ka taagnayd deegaano hoostaga degmada Adaan Yabaal ee gobolkaasi shabeelada Hoose.
Taliyaha ciidanka Milatariga Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi (Indha Qarshe) ayaa sheegay inay si buuxda u taageerayaan shacabka is abaabulay ee la dagaalamaya ururka Al Shabaab, wuxuu kaloo sheegay inay ka xun yihiin dadka ku dhintay dagaaladii dadka degaanka ay la galeen xoogaga Shabaab.
Dhanka kale Taliyaha ciidanka Milatariga Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi (Indha Qarshe) ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalada ay ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ka wadaan qaar ka mid ah gobolada gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta wuxuuna sheegay in howlgalo xoogan ay ka socdaan gobolada Hiiraan,shabeelooyinka iyo Jubooyinka ujeedkooduna uu yahay inay isku furan dhamaan wadooyinka isku xira magaalooyinka waa weyn ee dalka Soomaaliya oo qaar ka mid ah mudo go’doonsanaa.
← Dowlada Soomaaliya oo saxiixday qaraarka qaramada Midowe ee xaquuqda dadka Nafada ah.
Shil gaaro oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Mudug. →